Iimpawu ezizinzileyo: yintoni na, zisetyenziswa njani kunye nemizekelo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 18/05/2022 12:00 | Yendalo
Ishishini lefashoni lishishini lesibini elingcolisa umhlaba, kwaye ziya zisanda iinkampani nabayili babheja kwimveliso enoxanduva. Akukho mathandabuzo ukuba imboni yefashoni iye yajika kwifashoni ekhawulezayo kwiminyaka yakutshanje kwaye ayiyekanga ukukhula. Konke oku kukhokelele ekudalweni kwe iimpawu ezizinzileyo eziqinisekisa ukukhathalelwa kokusingqongileyo kunye nokunciphisa impembelelo yokusingqongileyo abanayo.
Kweli nqaku siza kukuxelela malunga neempawu eziphambili ezizinzileyo ezikhoyo, iimpawu zabo kunye nendlela ezinceda ngayo ukunciphisa impembelelo yokusingqongileyo.
1 iimpawu ezizinzileyo
2 Iimpawu ezingcono ezizinzileyo
2.1 Ingcali yobomi
2.5 IPlaya & Co.
2.6 UMary Embi
2.8 Ixesha elifutshane
2.9 iziketi zam
Kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo, kwakuphantse kube nzima ukuthenga iimpahla nokuzinxiba okokuqala yonke imihla. Ixabiso kunye nokungabikho kwamaketanga amakhulu, ukufikelela kakhulu kwaye kukhangayo kuluntu, kwasikhokelela ekubeni senze isigqibo esicinga ngakumbi xa sithenga. Kubekho utshintsho lwe-180 degree ngokuhamba kwexesha. Ngelixa amatyathanga amakhulu eengubo eziluka ethatha amanyathelo amancinci okunceda ngokuzinza kunye nokwenza ingqokelela ye-capsule, usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe.
Khumbula, ishishini lefashoni lishishini lesibini elingcolisekileyo emva kweoyile, kwaye iplanethi yethu ayinakuvumela iimveliso ezinkulu ukuba zenze iimpahla ngesiqwenga ngaphandle kokuqwalasela ifuthe lexesha elide kuthi. Ngenxa yesi sizathu, abanye abaqulunqi, iivenkile kunye neestylists baye bagqiba ekubeni baye emsebenzini, ngozinzo kunye nokukhathalela okusingqongileyo njengomgangatho.
Nangona uninzi lweempawu ezizinzileyo azikaziwa kakuhle, abathengi bazo bakhula kancinci kwaye baqala ukuqonda ukubaluleka kwempahla yethu eyenziweyo kwiimeko ezifanelekileyo zabasebenzi kunye neplanethi. Kangangokuba ezinye iifemu zikhethe ukwenza ezazo ingqokelela ezizinzileyo.
Ukongeza ekuthengeni impahla ezinzileyo kwezinye zeziza esizicebisayo apha ngezantsi, unokugcina okusingqongileyo ngokuya iivenkile zakudala, iindibano zocweyo zokuyila okanye ukutshintshisa okanye ukurenta iimpahla kwezinye izicelo esele ziphumelele. Alithandabuzeki elokuba ukukhusela iplanethi namhlanje nokuhlala usexesheni ayizozinto ezingahambelaniyo.
Kwilizwe lethu, kukho iintlobo ezininzi zeempawu ezinokuziphatha nezizinzileyo ezivelisa iimpahla ezingelula ukuzisebenzisa, kodwa nezintsha. Sikubonisa ezinye zeembono onokuthi ngazo uhlaziye i-wardrobe yakho ngelixa unika iplanethi ikhefu.
Iimpawu ezingcono ezizinzileyo
Eyona nto ibalulekileyo kule nkampani kukucinga ngoku ukushiya ilifa elihle kwizizukulwana ezizayo. I-Lifegist ithenga iGlobal Organic Textile Standard (GOTS) amalaphu aqinisekisiweyo eYurophu, kunye IMadrid kulapho zonke iimpahla ziveliswa khona ukuthintela i-carbon footprint yokuhambisa.
I-Ecoalf izimise njengelinye lawona magama aziwayo kwifashoni ezinzileyo kwilizwe lethu, nangaphaya kwemida yethu. Umdali wayo, uJavier Goyeneche, wayefuna ukubonisa ngeengubo zakhe ukuba kwakunokwenzeka ukuqhubeka nomgangatho ophezulu kunye nokunambitheka okulungileyo ngaphandle kokusebenzisa kakubi izixhobo zendalo.
Olu hlobo luzibophelele nge-100% kokusingqongileyo. Kangangokuba zonke izicathulo zabo zenzelwe e-Barcelona kwaye zingumsebenzi wabasebenzi abasebenza kwifektri kufuphi ne-Alicante, evumela ukuba bahlale behlola iimeko zokusebenza kunye nomgangatho wokuvelisa.
Ngeli xesha lokugqibela, baye basungula isihlangu esenziwe nge-nopal okanye i-corn husks, ezizinzileyo kunye nezixhobo ze-vegan. Akukho mathandabuzo ukuba umbono omtsha kunye nentsha iya kuba yimpumelelo.
Umzi-mveliso weempahla zokuqubha waseCatalan ulungele impumelelo njengoko ihlobo lisondela kwaye uhambo oluya elunxwemeni lufika. Umyili wezi ziqwenga nguPeque de Fortuny, enomdla kakhulu oye wakwazi ukudala iqoqo lokuhlambela elizinzileyo, eliveliswe ngokukodwa kwi-studio yayo e-Barcelona.
IPlaya & Co.
Le projekthi yefashoni yobumbano eyenziwe nguCristina Piña ibeka ingqwalasela kwindalo. Ngeempahla ezenziwe ngezinto eziphilayo ezihlaziyiweyo ezinxulumene nolwandle, inkqubo eyenza imbuyekezo kwaye emva koko inike inxalenye yenzuzo kwiprojekthi yentlalontle, i-Playa iguqule i-t-shirt enemigca ibe yimpahla yayo yeenkwenkwezi, unyaka nonyaka iphefumlelwe icons ezahlukeneyo
Inkampani ishiye ngasemva ifashoni ekhawulezayo, ebonisa ukuba iimpahla zinokuzinza kwaye zibe ntle, ngelixa ugcina amaxabiso afikelelekayo kwaye uhambelana neendlela ezivela kwiimpawu ezinkulu. Ukongeza, uMaría Malo uzama, ngephulo lakhe ngalinye, ukuba abathengi bakhe baphuhlise ingqondo eyazi ngakumbi yonke into ebangqongileyo.
Inkampani ifikelele isikhundla esiqinileyo kwishishini lefashoni. Abaqulunqi bayo abavela e-Alicante bagqibe kwelokuba bahambe inyathelo elinye kwihlabathi elizinzileyo kwaye baphonononga iindlela ezintsha zokuyila kunye nokusebenzisa izinto ezintsha eziluhlaza ukwenza uqokelelo lwabo, nangona benentlonipho epheleleyo yokusingqongileyo.
Ukuba ungomnye walabo baxabisa ukungafani kwengubo nganye kwi-wardrobe yakho, oku ngokungathandabuzekiyo kuya kuba yinto oyithandayo. Le projekthi iqulathe kuphela uhlelo olunyiniweyo lwet-shirts ezotywe ngamagcisa ali-12 asuka kwihlabathi jikelele.
Zonke iziqwenga zeSkirt zam luhlelo olulinganiselweyo oluphefumlelwe ziindawo ezahlukeneyo zesijikelezi-langa sethu ukuhlonipha ubutyebi bayo bendalo kunye namalungelo abantu abadali bayo.
Inkampani yaseCatalan izibophelele ekuphelelweni kwexesha leengqungquthela zayo, idala iingubo ezisemgangathweni ezingasoze ziphume kwisitayela. Ngezinto ezizinzileyo ezifana noboya obuphilayo kunye nomqhaphu, amalaphu asetyenzisiweyo kunye nemveliso yasekhaya, impahla ye-CUS iye yaba yeyona nto ibalulekileyo "kufuneka ube nayo" kwiwadi yakho.
Uphawu lwe-Ecoology lusebenzisa amalaphu endalo, endalo kunye nahlaziyiweyo ngononophelo olukhulu kwiinkcukacha kuyilo lwabo, beqinisekisa ukuba baya kuhlala kwiwadi yakho iminyaka emininzi ezayo.
Njengoko ubona, kubalulekile ukunxiba iimpahla ezinciphisa impembelelo yokusingqongileyo, kuba yenye yamashishini angcolisa iplanethi kwaye asetyenziswa kakhulu imihla ngemihla. Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga neempawu eziphambili ezizinzileyo ezikhoyo kunye nokuba zeziphi iindlela zabo zokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » iimpawu ezizinzileyo
yenzayo Iiveki ze4
Kubalulekile ukuba iinkampani ziqaphele ngakumbi imfuneko yokukhathalela okusingqongileyo. Kum, ziinkampani ezinkulu ezingcolisa kwaye zenza owona monakalo kwiplanethi yethu.
Sonke kufuneka siqaphele.
izinto zangaphandle ezilungileyo
Izichumisi zebhayoloji ngokuchasene nokonakaliswa komhlaba